လင်းထက် | MMFC
Home» Articles posted by လင်းထက်	လင်းထက် သရဲနီတပ်ဖွဲ့ ဝင်တွေနဲ့ အတူထာဝရ တစ်သွေး တစ်သားတည်း ရှင်သန်သွားမယ်..။
လင်းထက် ဟာ ပိုစ့်ပေါင်း 334 ပိုစ့် ရေးသား ထားပါသည်.။ Recent Posts
Player of 2012-2013
Filed as on 18/2 2013 14:34 with no comments
Filed as on 12/2 2013 13:43 with no comments
ဖီးလ်ဂျုန်း ရဲ့ ကျန်းမာရေး FA ထုတ်ပြန်ချက် ဖာဂီ စိတ်မချမ်းမြေ့
Filed as Injury News, Phil Jones, Sir Alex on 8/2 2013 11:09 with 1 comment
အိန်ဂျယ် ဒိုင် မာရီယာ ကိုခေါ်ယူဖို့ မန်ယူနိုက်တက် စဉ်းစားနေပြီလော
Filed as Transfer News on 8/2 2013 10:18 with4comments
ဇဟာ မင်းရဲ့ ဘောလုံး အဆင့် ဆက်ထိန်းပါ- ဆာဖာဂီ
Filed as Sir Alex, Zaha on 8/2 2013 09:29 with3comments
ရီးရဲယ် နှင့် ပထမဆုံး ရင်ဆိုင်ရမည့် အတွက် ဗန်ပါစီ ပျော်ရွှင်နေ
Filed as Interview, Real Madrid, Rene Meulensteen, Van Persie on 7/2 2013 14:24 with3comments
မော်ရင်ဟို ရာသီအကုန် အသင်းမှ ထွက်ခွာနိုင်- ရော်နယ်ဒို
Filed as C.Ronaldo, Jose Mourinho, News, Real Madrid on 7/2 2013 11:43 with2comments
ချန်ပီယံ ဖြစ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဆန္ဒပြင်းထန် နေပါပြီ- ဆာလဲအက်စ်
Filed as Interview, Premier League, Sir Alex on 7/2 2013 10:47 with4comments
မန်ယူနိုက်တက်ကို စွန့်ခွာခဲ့တာ နောင်တ မရပါဘူး (ရော်ဘီ ဘရေ့ဒီ)
Filed as Hull City, Interview, News on 5/2 2013 14:20 with2comments
မန်ယူနိုက်တက် ပစ်မှတ် ဇူမာ အသင်းဟောင်းနှင့် သက်တမ်းတိုး
Filed as News, Transfer News on 5/2 2013 12:34 with 1 comment
Comment on ယူနိုက်တက် ရဲ့ ခမ်းနားလှတဲ့ မင်းစိုးရာဇာ (သို့) သမိုင်းထဲက မန်ယူရဲ့ မမေ့နိုင်စရာ ဂန္တဝင် ဒင်းနစ်လော
အခုလို မန်ယူ အသင်းရဲ့ သူရဲကောင်း တစ်ယောက် အကြောင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး တင်ပြပေးတဲ့ အတွက် အထူးကျေးဇူး တင်ပါတယ် နောက်ပိုစ့် တွေလဲ မျှော်နေပါမယ်ဗျာ.. Comment on ရွန်နီအား ပေါင်သန်း(၇၀)ဖြင့် ရောင်းချရန် မန်ယူနှင့် မန်စီးတီးတို့ အကြိုသဘောတူညီမှူ့ ရရှိ
ဟဲဟဲ သတင်းက တင်တဲ့သူ အိပ်နေတဲ့ အချိန် ဖြစ်နေတာရယ် ကြိုပြီး ဧပြီ ၁ ရက် ၀၀:15 မှာ တက်အောင် တင်ပေးထားခဲ့တာ ကြည့်ပြီး ဟီးဟီး ယုံဘူးဆို ယုံဘူးဟေ့ ခွိခွိ... Comment on ရီးဒင်းနဲ့ပွဲ ဆက်လက် လွဲချော်ဦးမဲ့ နာနီနဲ့ ဖီးလ်ဂျုံးစ်
ငါတို့ ကစားသမားတွေ အမြန်ဆုံး ဒဏ်ရာက သက်သာ ပျောက်ကင်းပြီး အသင်းအတွက် ပြန်လည် ပေးဆပ်နိုင်ကြပါစေ. Comment on မတိုင်ပင်ရသေးလို့ပါ…ကူရှာပေးကြပါဦး
တော်တေးရယ် ထုတင် လွတ်သွားပေမယ့် ငါ့ထိပ်တုံးလေး ကျန်နေခဲ့သေးရို့ :P Comment on ရော်နယ်လ်ဒို မန်ယူအသင်းမှာ ပြန်ကစားလိမ့်မည်ဟု့ ဗီဒစ်က တစ်ပေးပြောကြား
ပြန်လာရင်လဲ ကောင်းတာပဲ ရိုနယ်ဒို ရူနီ ဗန်ပါစီ ကလဲဗာလေ အန်ဒါဆင် ကာဂါဝါ ဖီးလ်ဂျုံး ရာဖေး ဗီဒစ် အဲဗရာ ဝိုးးးး လန်းလိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်း Comment on မန်ယူ- နော့ဝှစ် ပွဲပြီး အနည်းငယ် အတွန့်တတ်မိခြင်း စီဘောက် အကောင့် သုံးလို့ ရပါပြီ ခင်ဗျာ တစ်ခါ တစ်ရံ အကောင့်ဖွင့်သူ ရီဂျစ်စတာ လုပ်တဲ့ အချိန် အကောင့်ဖွင့်ပေးမဲ့ သူတွေ ကျောင်းသွား ရုံးသွား အလုပ်သွားနေတဲ့ အချိန်နဲ့ တိုက်နေရင် သည်းခံပေးကြပါ .. Comment on Fantasy Premier League Gameweek 26 အမှတ် အများဆုံး ရရှိသူ
ဆွာရက် ပါတဲ့ အသင်းတွေ ကံကောင်းသွားတယ် ဟွင့် Comment on အောင်မြင်မှုတွေကို ဆာ အဲလက်စ် ဖာဂူဆန် ရေရှည်ထိန်းထားနိုင်ခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်း ၁၀ ချက်
နောက်ထပ်လဲ ဒီလို မျိုး ဘာသာပြန် ဆောင်းပါးလေးတွေ ရေးနိုင်ပါစေဗျာ အရမ်းကောင်းတယ် အားပေး.. Comment on တောင်ကိုရီးယား လူငယ်တိုက်စစ်မှူး ဆွမ်ဟောင်မင်အား မန်ယူနှင့် ချဲလ်ဆီး အပြိုင်စိတ်ဝင်စား
ဒီကောင်လေးရဲ့ ဂိုးစည်း ဧရိယာ ထိပ်က သွင်းတဲ့ ဂိုးတွေကတော့ ရှယ်ပဲ .... Comment on မန်ယူအတွက် လျှော့မတွက်သင့်တဲ့ အက်ဖ်အေဖလား ပွဲစဉ်
သုံးဂိုး တစ်ဂိုး ဆိုလို့ ကတော့ ဝင်းနားတို့ ပွဲကြို ခန့်မှန်း နာမည် ကြီးပြီပေါ့ကွာ Player of 2012-2013
in 1. David De Gea
21. Ángelo Henríquez
in FA PREMIER LEAGUE / FOOTBALL LEAGUE DIVISION ONE FA Cup 1908 1911 1952 1956 1957 1965 1967 1993 1994 1996 1997 1999 2000 2001 2003 2007 2008 2009 2011
1909 1948 1963 1977
1992 2006 2009 2010
1908 1911 1952 1956 1957 1965 [...]
in Injury News, Phil Jones, Sir Alex
မန်ယူနိုက်တက် မန်နေဂျာ ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန်ဟာ အင်္ဂလန် အသက် ၂၁ နှစ်အောက် အသင်းက သူ့ရဲ့ အသင်းသား ဖီးလ်ဂျုန်းရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေ အနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသင်း မန်နေဂျာ Stuart Pearce’s က အများပြည်သူ ကို သတင်းထုတ်ပြန်ဖို့ အလျှင် အမြန် ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့တာ ဝေဖန်သွား ပါတယ်..
မန်ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ နောက်နှစ် နွေရာသီ အရောင်းအဝယ် ဈေးကွက်မှာ ရီးရဲယ် မက်ဒရစ် အလယ်တန်း ကစားသမား အိန်ဂျယ်ဒိုင် မာရီယာ ကို ခေါ်ယူဖို့ မျက်စိ ဖွင့်ထားတယ် လို့ sport mole uk အားကစား သတင်း စာမျက်နှာက ဆိုပါတယ်.
in Sir Alex, Zaha
မန်ယူနိုက်တက် နဲ့ အသစ် စာချုပ် ချူပ်ဆိုထားတဲ့ ဇဟာ ကို ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန်က ဖုန်းဆက် ပြီး ခရစ်စတယ် ပဲလေ့စ် မှာ ရှိနေတဲ့ အခိုက်အတံ့ အခုလိုပဲ ကောင်းကောင်း ဆက်ကစားဖို့ နဲ့ ကစား နိုင်စွမ်း အဆင့်ကို မလျှော့ချဖို့ မန်ယူနိုက်တက် ဘောလုံး သမားများလို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထိန်းချုပ် ညွှန်ကြားဖို့ သတိပေးခဲ့ပါတယ်.
in Interview, Real Madrid, Rene Meulensteen, Van Persie
မန်ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှုး ဟာသူ့ရဲ့ အသင်းဟောင်း အာဆင်နယ် အသင်းနဲ့ အတူ ရီးရဲယ် မက်ဒရစ် အသင်းကို ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ လွဲချော် ခဲ့တဲ့ အတွက် အခု နောက်ဆုံး ချန်ပီယံလိဂ် ဆန်ကာတင် ၁၆ သင်း အဆင့်မှာ မန်ယူနိုက်တက် အသင်းနဲ့ အတူ ရီးရဲယ် အသင်းကို ရင်ဆိုင်ခွင့် ရဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်.
in C.Ronaldo, Jose Mourinho, News, Real Madrid
ရီးရဲယ် မက်ဒရစ် တောင်ပံ ကစားသမား ခရစ်တီယာနို ရိုနယ်ဒို မှ သူ၏ အသင်း နည်းပြ ဖြစ်သူ မော်ရင်ဟို သည် ယခုနှစ် ရာသီ ကုန်သည့် အချိန်တွင် အသင်းမှ ထွက်ခွာ နိုင်ဖွယ် ရှိသည်ဟု ထုတ်ဖော် ပြောကြား ခဲ့ပါသည်.
in Interview, Premier League, Sir Alex
မန်ယူနိုက်တက် မန်နေဂျာ ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန် က သူတို့ရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ပြိုင်ဘက် အသင်း မန်စီးတီး ထံက ပရီးမီးယား ချန်ပီယံ ဘွဲ့ကို ပြန်လည် လုယူဖို့ အတွက် ဦးတည်ချက် ထားကြဖို့ သူ့ အသင်းသားတွေကို သတိပေးလိုက် ပါတယ်..။
in Hull City, Interview, News
ယခင် မန်ယူနိုက်တက် အရံ တောင်ပံ လူငယ် ကစားသမားဟောင်း ယခု ဟူးလ် စီးတီး တောင်ပံ ကစားသမား ဖြစ်သူ ရော်ဘီ ဘရေ့ဒီက သူဟာ အခု အိုင်ယာလန် အသင်း အတွက် လက်ရွေးစင် လူစာရင်းမှာ ပါဝင်လာအောင် နည်းပြ ဖြစ်သူရဲ့ မျက်စိကျ ရွေးချယ်ခြင်း ခံရတဲ့ အတွက် မန်ယူနိုက်တက် အသင်းကို စွန့်ခွာခဲ့တဲ့ သူ့လုပ်ရပ် မှန်ကန်ခဲ့တယ်လို့ ပြောဆို သွားပါတယ်..
မန်ယူနိုက်တက် အသင်းနှင့် ချယ်ဆီး အသင်းတို့ နောက်နှစ် နွေရာသီ အပြောင်း အရွေ့တွင် ဈေးကြီး ပေးပြီး ခေါ်ယူရန် အပြိုင် စိတ်ဝင်စား ဆက်သွယ် နေသော ပြင်သစ် ကလပ် လိဂ် ၁ Saint Etienne အသင်းမှ နောက်ခံလူ ကာ့ဒ်ဇူမာ သည် သူ၏ အသင်းဟောင်း နှင့် နှစ်ရှည် စာချုပ်ချုပ်ဆို လိုက်ခြင်းဖြင့် ထို နှစ်သင်း၏ မျှော်လင့် ချက်များအား အဆုံးသတ် လိုက်သည်
Recent Postsလာနယ်ကိုးရဲ့ ဂိုးများနဲ့ လူငယ်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ မန်ယူMay 20, 2013Fantasy Premier League Gameweek 38 အမှတ် အများဆုံး ရရှိသူMay 20, 2013အနားယူတော့မည် ဆာအဲလက်စ်နဲ့ ပေါ့စခိုးလ်ကို ချီးကျူးခဲ့သည့် ဟာနန်ဒက်May 20, 2013ရွေဖိနပ်ဆု ရရှိတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူမိပါတယ် (ဗန်ပါစီ)May 20, 2013West Brom5–5Man United Premier League HighlightsMay 19, 2013သတင်းများအဆိုအရ ၀က်ဘရွန်းပွဲတွင် ရွန်းနီပါဝင်မည်မဟုတ်ဟု သိရMay 19, 2013ဖြစ်နိူင်ရင် ဖာဂူဆန်လက်အောက်မှာ အချိန်အကြာကြီး ကစားချင်ပါသေးတယ် (ကာကာဝါ)May 19, 2013မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့လိုကြောင်း အရ်ိပ်အမွက်ပြောကြားခဲ့သည့် ဖယ်လိုင်နီMay 19, 2013ရွန်နီ၏ အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စ မိုရက်စ်ကို အာဏာကုန် လွှဲအပ်လိုက်သည့် ဆြာအဲလက်စ်May 18, 2013တီယာဂို အက်ကန်ထရာကို ခေါ်ယူရန် လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်သည့် ဘာကာMay 18, 2013	(c) 2012 Myanmar Manchester United Fans Club - Web Design by Admin Team